Ibhafu entsha eshushu! Ngokulandelayo kwi-spa kunye negalufa!
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguRae
Imiswe kumngxuma weCapon nangaphakathi kwehlathi leSizwe laseGeorge Washington kunye nezinyuko ukusuka kwindawo edumileyo yaseCapon Springs Resort uya kufumana iBungalow kaNksz Bessie esanda kulungiswa. I-Bunglaow kaNksz. UNksz. Bessie wayengumnikazi wokuqala wale bungalow kwaye igama linika imbeko kuye.
I-Bungalow kaNksz Bessie yeyona ndawo ifanelekileyo yokubeka kwiveranda yangaphambili kwaye umamele umlambo okanye upakishe ubhaka wakho ukuze uhambe kwihlathi leSizwe laseGeorge Washington. IBungalow kaNksz Bessie ibonelela ngayo yonke into yokuhlala kwakho eWest Virginia entle! Umgangatho osezantsi ubonelela ngegumbi lokulala elinebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Umgangatho ophezulu unendawo yokuhlala enebhedi enkulu, iibhedi ezimbini ezingamawele, umatrasi womoya kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo ukupheka ukutya okanye ukusebenzisa i-grill yethu (igesi okanye ilahle) ngaphandle kwendawo yokuzonwabisa yangaphandle. Relax ngaphandle ngasemgodini womlilo (inkuni zomlilo ezinikezelweyo) kwizitulo ze-Adirondack okanye uhlale kwiplanga yaseBrazil ejikeleze ivaranda kwaye ujabulele izandi zomlambo. Chitha ixesha nosapho lwakho ukonwabela imidlalo yangaphandle, imidlalo yangaphakathi, iimuvi, kunye neencwadi ukugcina wonke umntu onwabile. Yonke into oyifunayo ukuze ufumane indlela yakho yaseWest Virginia.
Intloko yeshawari yeengxangxasi
Ubushushu kwigumbi lokuhlambela umgangatho ongundoqo
Indawo yomlilo yerhasi
Umgodi womlilo (iinkuni zomlilo zinikezelwe)
I-charcoal grill yangaphandle/umtshayi (Amalahle akaqukwanga)
Isifuba somkhenkce sangaphandle
Isipholisi samanzi sigcwaliswe nge "Capon Springs Water"
Itafile yepiknikhi w/ isambrela
Isithethi seBluetooth sangaphandle
Igumbi lokuhlambela isithethi seBluetooth
Isithethi seBluetooth sasekhitshini
Isifudumezi samanzi esingena tanki
Line line ifowuni kunye unlimited umgama omde umnxeba
Kreurig, Imbiza yeKofu, iKofu yeBean Grinder
Ikhitshi egcweleyo umenzi wekofu, imicrowave, uluhlu lwegesi/ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, ioveni yetoaster, kunye neblender. Iishiti, iitawuli, ishampu, iconditioner, kunye nebhafu yokuhlamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Rae
.Indawo yethu yeyabandwendweli abafuna ukuziva ukuba bakwiParadesi yabo yaseWest Virginia. Abanini/umphathi wepropathi bahlala kumgama omfutshane kwaye bayafumaneka ukuxhasa nayiphi na imfuno kunye nokubonelela ngeengcebiso malunga nokujikeleza iWest Virginia.
.Indawo yethu yeyabandwendweli abafuna ukuziva ukuba bakwiParadesi yabo yaseWest Virginia. Abanini/umphathi wepropathi bahlala kumgama omfutshane kwaye bayafumaneka ukuxhasa nayiph…